पत्रकारसंग किन तर्कियो एमसीसी टोलि? प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पहिला ओलीलाई भेट्नुको कारण के ?
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।
उनको चार दिने भ्रमणमा नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि साथमा छन्। उनीहरू बिहीबार कतारबाट काठमाडौँ आएका हुन् । नेपालमा एमसिसी संसदमा पास गर्ने विषय पेचिलो बनिरहेका बेला उनी नेपाल आएकी हुन् ।
सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम छ । तर त्यो भन्दा अघि उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई भेट्ने भएका छन् । अमेरिकी दूतावास स्रोतका अनुसार दिउँसो एमाले अध्यक्ष ओलीबाट राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गर्ने उनीहरूले भरे वा भाेलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नेछन् ।
बिहान सवा ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लेका उनीहरू पत्रकारहरूसँग तर्किँदै सिधै मेरिट होटल गएर बसेका छन् । बिहानको खाना उनीहरूले साढे १२ बजे अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीको कमलादीस्थित निवासमा गएर खानेछन् ।
त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकाेट जानेछन् । त्यहाँबाट फर्केर उनीहरूले याक एण्ड यतिमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए–नेपाल)को निरीक्षण गर्नेछन् । एमसीए नेपाल एमसीसीको प्रवर्धन गर्न गठित निकाय हो ।
सुरक्षा चुनौती देखाउँदै पत्रकार सम्मेलन नगर्ने निचोडमा पुगेका फतिमा र जोनथनले आजै विज्ञप्ति भने जारी गर्ने तयारी गरेका छन् ।‘एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नभएको र संशोधन पनि गर्न नमिल्नेु भन्दै एमसिसीले बुधबार मात्र नेपाल सरकारलाई जवाफ फर्काएको थियो । सन् २०१९ मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसिसी परियोजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।